Caadi ahaan | February 2020
Ugu Weyn Ee Caadi ahaan
Noocyada daryeelka caafimaadka, sida loo koro miraha khudradda
Medlar ma aha warshad aad u caan ah oo ku taal dhulkeena, laakiin qaar ka mid ah dadka jecel raaxada ayaa jecel inay koraan. Noocyada ugu caansan 2da maareyn - Jarmalka iyo Jarmalka. Waxay ku koraan meelaha leh dabaasha kuleylka ah iyo kuleylaha khafiifka ah, laakiin sababtoo ah heer-kulka sareeyaashu ma aha mid marwalba suurtogal ah in lagu koro dhulka banaan.
Passionflower: daryeelka dhammeystiran, bogsashada guryaha iyo codsiyada caafimaadka
Passionflower waa warshad qalaad oo cajiib ah. Waxay ka tirsan tahay qoysaska of Passion Flowers oo leh in ka badan lix boqol oo nooc. Geedka geedka canaaskani wuxuu ku koraa koofurta America, Australia, Aasiya iyo Mediterranean. Passionflower ma aha magaca kaliya ee geedka, waxaa sidoo kale loo yaqaan 'passionflower, liana amarka, xiddigaha kubbadda, miro dareen, granadilla, ubaxa ah ee riyooyinka Rabbiga.
Kobcinta miisaanka daaqadaha, aqalka qalaad
Maqaalku waa dusha sare ee dhaadheer. Wuxuu u jeedaa jimicsi. Waxaa jira qiyaastii 30 nooc, laakiin guriga dhexdiisa, daawada ayaa si wacan u firirsan iyo fruiting. Ma taqaanaa? Mucaaradku waxay bilaabeen in ay ku koraan Japan. Maqasadka guriga ayaa kori kara dhererka 1.5-2 meter. Caleenta dhirta waa dhuuban, maqaar, glossy on top, hoos - qoorta.
Sida loo koro kalluunka guriga
Wixii bannaanka u badan, haysashada warshad ah oo aan jeclayn kaliya isha, laakiin sidoo kale midho dhasho, waa fikrad sax ah. Mid ka mid ah dhirta miraha dhirta ah, kaas oo ku helay sumcaddii weyn ee dhawaan - kumquat, waa warshad citrus ah oo lagu kori karo guriga. Ma taqaanaa? Waxaa laga tarjumay shiinada Shiinaha - waa "tufaax dahabi ah".
Maxay tahay muusikada waxtarka leh iyo dhibta leh, waxaynu baranaa
Sannad kasta oo khudrado badan oo dheeraad ah oo muuqda waxay ka muuqanayaan dukaamada dukaamadan, sidaa daraadeed kumquat (or orange orange) ayaa muddo dheer joogsatay inay ahaato mid cusub. Sida midhaha miraha citrus, miro-meylku wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo faa'iido leh, taas oo looga hadli doono hoos. Waxyaabaha ay ka kooban tahay kumquat: waa nooc ka mid ah fiitamiinada iyo macdanta, dibadda, kumquat waxay u egtahay isku dar ah liinta iyo liinta.
Naciimo: noocee iyo noocyo kala duwan oo miro khafiif ah ayaa loo qaybiyaa
Tan iyo markii Christopher Columbus kala bar kun sano ka hor uu ahaa Yurub ugu horeeyay ee dhadhamiya caanaha, palette ee midabada oo sharraxaad ka bixiyay arinkan ayaa si weyn loo hirgeliyay. Waxay soo baxday, gaar ahaan, in ay jiraan 9 nooc oo loo yaqaan 'pineapples' iyo noocyo farabadan oo kala duwan iyo noocyo badan. U diyaari ujeedooyinka sharraxaadda.
Sida loo koro papaya laga bilaabo abuurka guriga
Dhirta qalaad ee guriga ayaa mar dambe la yaabay, laakiin waxay weli ku faraxsan yihiin indhahooda iyo dhirta kulaylaha. Papaya waa mid ka mid ah dhirtaas, muuqaalkuna wuxuu u eg yahay geed caleenta leh caleemo ballaaran oo dheer. Dabeecadda, dhererkeedu waa 10 mitir, guriga - ilaa 6 mitir oo dherer ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Caadi ahaan 2020